‘मेडिकल काउन्सिलको विकृति बढार्दै डाक्टरको साख जोगाउँछु’
भदौ १९, २०७४ सोमवार २२:४१:०० प्रकाशित
डा नारायणविक्रम थापा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । उनी हाल ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छन् । काउन्सिलको चुनावी दौडमा लागेका डा थापासँग उनको उम्मेदवारी र चुनावी एजेन्डाका विषयमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले गरेको कुराकानीः
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
पछिल्लो समय नेपाल मेडिकल काउन्सिलदेखि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक विकृति–विसंगति छ भन्ने खबर बाहिर आइरहेको छ । गुणस्तरीय उपचार सेवा दिनुपर्ने डाक्टरहरुको विषयमा प्रश्न आइरहेको छ । काउन्सिलले यो विषयमा काम गर्न सकिरहेको छैन । अर्कातिर, काउन्सिलमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने खबर पनि आइरहेको छ । हामीले यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर बाहिरबाट आवाज उठाइरह्यौं । मेडिकल क्षेत्रको सुधारका लागि डा गोविन्द केसीले आवाज उठाइरहनुभयो । सरकारले डा केसीसँग सम्झौता पनि गरे पनि कार्यान्वयन भएन । त्यही भएर काउन्सिलमै गएर विकृति बढार्न उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
कस्ता छन् त तपाईंका एजेन्डा ?
पहिलो कुरा त म इमानदारीका साथ काम गर्छु । काउन्सिलमा गएपछि पारदर्शी भएर काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । अर्को, काउन्सिलमा भएको विकृतिकै कारण समग्र डाक्टरहरुकै बदनाम हुँदै गएको छ । त्यसकारण त्यसलाई रोक्ने अब मेरो एजेन्डा हुन्छ । डाक्टरहरुको गुम्दो साख फर्काउन म लाग्नेछु ।
काउन्सिलमा त स्वयंसेवी रुपमा काम गर्नुपर्छ । तर, त्यहाँ पटकपटक जान चाहने भिड देखिन्छ । यस्तो आकर्षण किन भएको होला?
काउन्सिलमा सिस्टम नभएको र केहीले स्वंयसेवी संस्थालाई व्यवसाय जस्तो बनाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसको यथार्थ जानकारी त मलाई छैन । तर, सम्भवतः पटकपटक संस्थामा दोहोरिने खेल हेर्दा यस्तै हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ । हाम्रो स्पस्ट धारणा छ, काउन्सिललाई व्यवसाय चलाउने संस्था बनाउनु हुँदैन । म स्वयंसेवी संस्थालाई व्यवसाय चलाउने स्थान बन्न दिनेछैन । यसको लागि म निरन्तर डटिरहनेछु । डाक्टरको आचरण अनुगमन गर्ने संस्थामा पुग्नेको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । म एक पटक निर्वाचित भएँ भने इमानदारीका साथ काम गर्ने प्रणाली बसाल्छु । तर, अर्को पटक फेरि त्यो संस्थामा जाँदिनँ।
काउन्सिलले गलत काम गर्ने डाक्टरलाई पनि जोगाउँछ भन्ने आरोप छ । तपाईंले पनि त्यही गर्ने त होला नि !
काउन्सिल सिट निर्धारणमा मात्र बढी केन्द्रित भयो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु चिकित्सकको दायित्व हो । तर, त्यो दायित्व राम्रोसँग परिपालना भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन÷निगरानी गर्ने काम भने भएन । त्यही भएर डाक्टरमाथि प्रश्न आइरहेको हो । अनुगमन नहुँदा केही केस आएका पनि हुन् । हामी गलतलाई ढाकछोप गर्नेछैनौं । गलतलाई ढाकछोप गरेकै कारण समग्र डाक्टरको साख गिरेको हो । त्यसकारण गलत गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ । अर्को कुरा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि डाक्टरलाई समय–समयमा सीप तथा क्षमता बढाउने काम पनि भएको छैन । यसले पनि केही समस्या निम्त्याएको हो । अब हामी डाक्टरको सीप र क्षमता बढाउने काममा पनि लाग्नेछौं ।
तपाईंको योजना पनि चुनावी नारा मात्र त होला । जितेपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
म काम गर्ने मानिस हुँ । मैले अहिले चुनावका लागि ल्याएका सबै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछु । काम गर्न भनेर नै म त्यहाँ जान खोजेको हुँ । अहिले हामीले काउन्सिलको विकृति सफा गरेनौं भने भोलि हामीलाई डाक्टर भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आउनेछ । त्यसकारण मेरो योजना नारामा मात्र सीमित हुँदैन । आजको भोलि नै सुधार गर्न त मसँग जादुको छडी छैन । तर, मसँग इमानदारीका साथ काम गर्ने आत्मबल छ।
मेरो एक्लो प्रयासले मात्र काउन्सिलमा एकै पटक सुधार आउने होइन । काउन्सिलमा जाने सबैको टिमवर्क चाहिन्छ । तर, हाम्रो टिममा कसैले गलत गर्न खोज्यो भने त्यसलाई हामी बाहिर ल्याउँछौं । कसैले काम गर्न रोक्यो भने किन रोक्यो, के अप्ठेरो प¥यो, कसले दबाव दियो भनेर सबै सार्वजनिक गर्छु।